I recipe yePastida
Sipheka i-pashtid i-Pastida ibhekisela kwiitya zokutya zamaYuda kwaye i-casserole kunye ne-pie ngexesha elinye. Indlela yokulungiselela esi sidlo iyonaqobo: ukuzaliswa kufakwa phakathi kwinqaku, njengokungathi kwi-pancake. Njengokuzaliswa, nayiphi na izithako zingasetyenziselwa: inyama, intlanzi, imifuno, amakhowe - konke esiqhele ukufaka kwiipeyi. Ukufumana iimpahla ze-casserole, i-pâtida inokubandakanya oko kusele isidlo sasemini okanye isidlo sakusihlwa: iinkukhu zeenkukhu, iifatata ezifihliweyo, imifuno, njl. Umquba we-pashtida wenziwe kumxube wegour okanye ukhilimu omuncu ngeayonnaise kunye namaqanda. I-Cottage shiese kunye noshizi isenokusetyenziswa. I-Pastida ithandwayo kumazwe amaninzi ngenxa yobulula bokupheka kunye nokuhlukahluka okuninzi kunye nokuzaliswa.
Ukhilimu omuncu 200 g
Umgubo wengqolowa 1 tbsp.
Umnquba weMbewu 1 unako
I-cheese nzima 200 g
I-Nutmeg i-powdered nge-0.25 tsp.
Inyathelo 1 Lungiselela izithako ze-pashtida: ukhilimu omuncu, i-mayonnaise, amaqanda, umgubo, i-soda, ingqolowa, ushizi, i-dill, i-nutmeg.
Inyathelo 2 I-ihisk mayonnaise, ukhilimu omuncu kunye namaqanda.
Inyathelo lesi-3 Yongeza i-soda (musa ukucima, njengoko i-asidi isisikhilimu omuncu), uthele ngomgubo uze uxoke inhlama, njengokungathi kwi-pancake.
Inyathelo 4 Lungiselela ukuzaliswa: xuba ummbila owenziwe ngotya (i-liquid pre-drained), ushizi obiziweyo kwi-grater enkulu kunye nedill eqoshiwe. Ingqolowa ingathatyathwa yipayipi eluhlaza xa ifunwa.
Isinyathelo 5 Thetha ihafu yesinhla ibe yintonga ye-pie (ine-22 cm ububanzi kunye no-4 cm ukuphakama). Ukuba i-silicone, ke akudingeki ukuba uyilitye.
Inyathelo 6 Qaphela ngokukhawuleza ukuzaliswa kwenhlama, ungaxubeki.
Inyathelo 7 Gcwalisa ukuzaliswa ngentlama esele kwaye ubhaka ehovini ngo-180 ° C. Ixesha lokupheka li-30-40 imizuzu.
Inyathelo lesi-8 Sihlola ukulungela, njengesiqhelo kunye neepeyi, usebenzisa i-skewer. I-Casserole, ukupholisa, ingancinci - oku kuqhelekileyo.
Inyathelo 9 Sifaka i-pate kwisitya njengepayi, sinqumle ibe ngamacandelo kwaye uyishushu. Nangona kunjalo, i-pashtida ekhuhlileyo ayilahlekanga nayiphi na inkcazo.
Isaladi «Male caprice»
Isaladi kunye nengqolowa kunye namakhowe
Ilayisi kunye nemifuno kwi-multivark
Iklabishi ihamba ngeefama zokutya
I-rosettes enomphunga omnandi
Isaladi yesatato ngeibhisikidi
Yintoni ekufuneka ibonakale ibhokhwe ebonakalayo?
Iimpawu, izizathu, unyango kunye nokukhusela i-gingivitis
I-Recipe yesaladi "I-Garnet isongo"
Iintlobo zabasetyhini ngamaxesha
Ukusetyenziswa kweelandi elibuhlungu
I-Crochet ene-loop eneengqungquthela ezithintekayo: inyathelo ngesinyathelo
I-triad ephathekayo: i-nyl-trends yexesha elibandayo-2016